Indra na-eweta ngwa ruru eru ịchọpụta na ijikwa drones | Akụrụngwa n'efu
Indra na-enye ngwa nwere ike ịchọpụta na ịchịkwa drones
Ọ bụrụ na ịmaghị ya, gwa gị nke ahụ Indra bụ otu n’ime ọtụtụ mba ndị Spen metụtara ụwa nke mmepe sọftụwia na ndụmọdụ kachasị mkpa na ọkwa European. N'iburu nke a n'uche, ọ naghị esiri ike ịghọta na ha ekpebiela ịbanye n'ụwa nke drones site na ịkọwa ụfọdụ azịza, n'okwu a metụtara ụwa nchekwa.
Taa, m ga-achọ ịgwa gị gbasara usoro nwere ọgụgụ isi nke ARMS, Usoro RPAS Multisensor Mgbochi, nke ndị injinịa Indra mepụtara, ikpo okwu nke akwadoro ịchọpụta ụdị drone ọ bụla dịpụrụ adịpụ site na a Rada nke nwere ọtụtụ kilomita site na nso. Ozugbo achọpụtara drone ahụ, ikpo okwu gbanwere steeti ma rụọ ọrụ a onye na-egbochi ugboro ugboro nke ìgwè dị iche iche ịkagbu mgbaàmà nke akụrụngwa geolocation nke drone yana njikọ nkwukọrịta ya na onye njikwa.
Indra na-anwale ngwanrọ nke nwere ike ịchọta na ịchịkwa drone.
Obi abụọ adịghị ya, ọ ghaghị ịmata na Indra na-agbanye nnukwu ego na mpaghara na mmiri na nkwukọrịta, teknụzụ ọhụụ ọhụụ nke na-eweta nnukwu nsogbu n'ụwa niile, ọkachasị, dị ka anyị hụgoro n'oge ụfọdụ, mgbe ị na-abanye n'ụgbọelu na-enweghị atụ. oghere ikukuMa ọ bụ imebi emebi ma ọ bụ ozugbo n'ihi na ihe ọmụma nke onye na-achịkwa ya, omume nke nwere ike imebi nnukwu ihe na ọbụlagodi nde mfu maka ndị na-eme ihe nkiri na mbara ikuku ndị a.
N'oge ahụ, dị ka ekwenyela, usoro a ka nọ na mmepe mmepe ebe ọ bụ na ndị mba dị iche iche nke Spanish ka na-eme nyocha iji nweta oke nkenke mgbe ọ bịara n'elu ikpo okwu iji chọpụta, dezie ma soro ụdị ụgbọelu ọ bụla na-ejighị ya jikọta iji nke igwe onyonyo na ige redio. Nke abụọ mbido ga-ekwe ka usoro ARMS na-achịkwa nke drone na-eduzi ya na ebe nchekwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » drones » Indra na-enye ngwa nwere ike ịchọpụta na ịchịkwa drones
Ndị CIA ga-enwe ike ịwakpo mwakpo mmiri na-enye ekele maka nchịkwa Trump
Mepụta usoro nnabata nnabata na Raspberry Pi